उच्च रक्तचापमा औषधिको विकल्प, रक्सी कति खाने ? - Internet Khabar
Home Health उच्च रक्तचापमा औषधिको विकल्प, रक्सी कति खाने ?
डा.ओममूर्ति अनिल उच्च रक्तचापमा औषधिको प्रयोग जुनसुकै व्यक्तिका लागि पनि सहजै स्वीकार्य हुँदैन । यसका कारणहरूमध्ये औषधिको साइड इफेक्टको डर, लामो समयसम्म निरन्तर प्रयोग गर्ने झन्झट, आर्थिक भार, बानी पर्ने डर, अरूले के भन्ला भन्ने पीर आदि प्रमुख मानिन्छन् । औषधि खाने वा नखाने निर्णय गर्नुभन्दा पहिला दुइटा कुरामा होश पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ । पहिलो, अहिले नै औषधि खानुपर्ने भइसकेको हो कि होइन ? दोस्रो, के म जीवनशैली र अन्य माध्यमले रक्तचापलाई निरन्तर नियन्त्रणमा राख्न सक्छु ? पहिलो प्रश्नको उत्तर डाक्टरले विभिन्न जाँचको आधारमा दिन सक्छ भने दोस्रो बिरामीको अनुशासन र आत्मविश्वासमा भर पर्छ ।
१. दैनिक १ घन्टा हिंँड्नु
तनाव कम गर्न आफूलाई उपयुक्त हुने तरिका अपनाउन सकिन्छ । तनावको कारणले बढेको रक्तचापका लागि प्राय: औषधि खानु पर्दैन, कहिलेकाहीं छोटो अवधिका लागि औषधि प्रयोग गरे पनि तनाव घटेपछि औषधि पनि बन्द गर्न मिल्छ । उच्च रक्तचाप त कुनै न कुनै दिन हामी सबैलाई हुन्छ नै, उमेरसंँग रक्तचाप बढ्नु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो । जीवनशैलीमा आवश्यक परिवर्तन ल्याएमा रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । औषधिको प्रयोग समयमै गरेर, माथि उल्लेखित उपायहरू अपनाएमा औषधिको मात्रा घटाउन सजिलो हुन्छ । पछि रक्तचापमा राम्रो सुधार देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार औषधि बन्दसमेत गर्न मिल्छ ।-dainik Nepal
Previous articleएमाले छोडेर थप ३ सांसद नयाँ समाजवादीमा प्रवेश, ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै
Next articleआयोजनाको बाँकी काम छिटो गर्न प्रमको निर्देशन
गर्दनको यस प्वाइन्टमा राख्नुहोस् बरफ वा आइसको टुक्रा, केही मिनेटमै देख्नुहुनेछ चमत्कार